ESI TINYE BLUETOOTH NA KỌMPUTA WINDOWS 7 - WINDOWS - 2019
Ịwụnye Bluetooth na kọmputa na Windows 7
Ọ bụ mmadụ ole na ole maara, ma na Mozilla Firefox, nakwa na Google Chrome, e nwere mkpịsị akwụkwọ mpịakọta aka nke na-enye gị ohere ịchọta na ịnyagharịa na peeji nke ịchọrọ. Otu esi edozi ibe ihe edokọbara, a ga-atụle isiokwu a.
Ogwe ibe edokọbara bụ ihe nchọgharị Mozilla Firefox ntanetị pụrụ iche, nke dị na nkụnye ihe nchọgharị ahụ. A ga-etinye akwụkwọ edokọbara gị na panel a, nke ga-enye gị ohere ịnwe akwụkwọ dị mkpa "na aka" ma n'ụzọ nkịtị na otu pịa gaa ha.
Kedu esi edozi ibe ihe edokọbara?
Site na ndabara, ogwe ibe edokọbara adịghị egosipụta na Mozilla Firefox. Iji mee ya, pịa bọtịnụ ihe nchọgharị na mpaghara ala nke windo ahụ na-egosi, pịa bọtịnụ ahụ. "Gbanwee".
Pịa bọtịnụ ahụ "Gosi / Zoo Panels" ma fanye igbe ahụ "Ogwe akwụkwọ edinabara".
Mechie windo ntọala site na ịpị taabụ na akara akara.
Ozugbo n'okpuru ebe nkesa nke ihe nchọgharị ahụ ga-abụ nchịkọta ọzọ, nke bụ akara ntinye akwụkwọ.
Iji hazie ibe edokọbara egosipụta na mpaghara a, pịa akara ngosi ibe edokọbara na mpaghara aka nri dị elu nke ihe nchọgharị ma gaa "Gosi ihe edokọbara niile".
A ga - egosiputa nchekwa niile dị na ibe edokọbara na mpịakọta aka ekpe. Ka ịnyefee ibe edokọbara site na otu nchekwa na nchekwa akwụkwọ edokọbara, pịazie ya (Ctrl + C), mepee folda Mbinetịaka Bookmarks na mado ihe edokọbara (Ctrl + V).
Ọzọkwa, enwere ike ịmepụta ibe edokwubara ozugbo na nchekwa a. Iji mee nke a, mepee akara edokọbara na bọtịnụ-nri na mpaghara efu ọ bụla site na ibe edokọbara. Na ndokwa menu nke na-egosi, họrọ "New Bookmark".
Ihuenyo ahụ ga-egosipụta windo ihe ntinye ama maka akara ngosi, nke ị ga-eji tinye aha saịtị, adreesị ya, ma, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, tinye mkpado na nkọwa.
Enwere ike ihichapụ ihe edokọbara oke. Naanị pịa na ibe edokọbara na bọtịnụ òké aka nri wee họrọ "Hichapụ".
Itinye akara edokọbara na ibe akwụkwọ edokọbara ka ị na-egwugharị weebụ, gaa na weebụ weebụ chọrọ ma pịa akara ngosi kpakpando n'akụkụ aka nri nke akara ngosi ahụ na akara mmuke. Ihuenyo ga-apụta na ihuenyo, nke ị ga-anọ na kọlụm "Nchekwa" ga-etinye ya "Ogwe akwụkwọ edinabara".
Ihe edokọbara dị na panel nwere ike ịhazi n'usoro ị chọrọ. Naanị jide ala ibe edokọbara ma dọrọ ya na mpaghara achọrọ. Ozugbo ị hapụrụ bọtịnụ òké, a ga-edebe akara ngosi ahụ na ebe ọhụrụ ya.
Iji nwee ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ibe edokọbara iji dabara na ụlọ akwụkwọ edokọbara, a na-agba ha ume ka ha setịpụrụ utu aha. Iji mee nke a, pịa akara edokọbara na bọtịnụ òké aka nri na n'ime oghere mepere emepe họrọ ihe ahụ "Njirimara".
Na windo meghere na kọlụm "Aha" tinye ọkwa ọhụrụ, mkpumkpu, akara aha.
Mozilla Firefox nwere ọtụtụ ihe ndị na-akpali akpali nke ga-eme ka weebụ sọọfụ dịkwuo mfe ma na-arụpụta ihe. Ogwe ibe edokọbara ahụ adịghịkwa oke.